Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UPat Mills, u-Alyson Richards usithatha ngaphakathi 'The Retreat' Horror / Thriller
Ukuhlehla hit theatre and on video-on-demand ngoMeyi 21, 2021. Le filimu ikhuluma ngendaba yezithandani ezingongqingili ezinobudlelwano bazo obusemadwaleni abahambela endlini yezinkuni ehlathini ukuze bahlehle ngaphambi komshado kuphela bagcine ngokulwa basinde lapho iqembu lababulali bezilwi liqala ukuzizingela.
iHorror ibe nethuba lokuhlala phansi nombhali u-Alyson Richards nomqondisi UPat Mills ukuxoxa ngefilimu, futhi bonke babejabule kakhulu ukusiyisa ekusithekeni kwesici sabo.
KuRichards, kubonakala sengathi yindaba ka Ukuhlehla wakhula ngqo empilweni yangempela ngandlela thile ngemuva kokuthatha uhambo nonkosikazi wakhe baya egumbini elisehlathini.
“Sivukele lapho futhi yonke into ibiyinhle,” eqala. “Asikaze simbone osimemile, kodwa sihlale sizizwa sengathi siyabhekwa. Sasihambahamba sibuye sibuye futhi kube namathawula amasha namanothi amancane azungeze indawo. Kuthi ukungatatazeli. Kwakukhona lo mqondo ocacile ukuthi kukhona umuntu lapha futhi osibukayo. Asibaboni. Njengabesifazane nanjengabesifazane abanesibindi, ngaqala ukuzizwa ngiphanjanisiwe. Njengabo, bangobani laba bantu? Ingabe bayasithanda? Abasithandi yini? Ngemuva kwalokho umcabango wami waqala ukujikeleza futhi lapho kwaqala khona uhlobo lomqondo. ”
URichards noMills babekade befuna ukudala ifilimu eyethusayo ndawonye isikhathi eside ngakho-ke kwakungeyona into engacabangi kumqondisi lapho emtshela ngombono wakhe. Baqala ukuhlola izindawo ngenkathi umbhali esebenza kwiskripthi futhi basebenzisa abakutholile ukwazisa izikhathi ezingaphakathi kwendaba.
Ngandlela thile, beyizakhi zobuchwepheshe obubuyela emuva kule ndaba, indlela ebingakaze yenziwe ngaphambili, kepha lokho bekubonakala kuyisebenzela ifilimu. Lokho bekungeyona ukuphela kwento edonsele uMills kule ndaba, noma kunjalo.
"Enye yezinto engivele ngaphendula ngayo futhi ngadonsela kuyo ukuthi laba besifazane ababili abayizitabane abavukelani futhi bayasizana ngempela," kusho yena. “Ngeshwa, ohlotsheni olusabisayo, sibona okuningi okuphambene. Kusuka ku- Instinct Basic kuya Ukuphakama Okuphezulu- lezo yizinkomba ezindala — abalingiswa bayaphendukelana bese ngifana nokuthi, 'Banjalo-ke abantu abayizitabane.' Siya endaweni ethusayo futhi kufanele sincike kuyo futhi sisizane ukuze siphile kuyo. ”
Le filimu ingukuhamba okukhulu ngabalingisi abanethalente okubandakanya uSarah Allen (I-Expanse) noTommie-Amber Pirie (Izingqondo ezifanayo) njengombhangqwana ophakathi no-Aaron Ashmore (Locke & Ukhiye) njengomuntu ophethe iqembu elibazingelayo.
"Wonke umuntu ulunge kakhulu ebhayisikobho," kusho uMills. “Mina no-Alyson besifuna ukuthi imidlalo esefilimini izwakale inesisekelo sangempela. Akekho ozizwa emkhulu kakhulu noma emncane kakhulu. Izwakala impela nje ngokulungile ezingeni elifanele. Ikakhulukazi noTommie noSarah njengobudlelwano obuphakathi, sawathanda kakhulu amakhemikhali abo. Bazizwa bengokoqobo njengabantu abashadile obekubalulekile kithina. ”
Ngabalingisi abakhulu abavalelwe endaweni, izisebenzi kwakudingeka ziphothule izindawo kuphela. Ngeshwa, bekungeyona inqubo ebushelelezi njengoba bebengathanda. UMills wayesevele elusebenzile uhlu lwakhe lokudutshulwa kanti nomdwebi wabo wezithombe zama-cinema wayenezinhlelo endaweni yekhabhathi labo, kuphela ukuthi liwele ngaphezu kwamahora angama-24 ngaphambi kokuthi kuqalwe ukudubula. Kubaphoqelele ukuthi babe nobuciko futhi ekugcineni bajabule nakakhulu lapho befika khona kunalokho ababenomuzwa wokuthi bebezoba nendawo yokuqala.
Ngaleso sikhathi lapho isimo sezulu sasikhona Ukuhlehla nginqume nokujika.
“Into ejabulisa kakhulu ukuthi zonke lezi zinqumo uzenza uma wenza ifilimu kodwa ekugcineni, uyisisulu semvelo,” kusho lo mphathi. “Sisungule lesi simo sezulu sasekwindla sabe sesihamba phakathi nendawo sabuka iqhwa. Sasixubha iqhwa bese senza lezi zibhamu zokuvala ngoba asikwazanga ukukhombisa imvelo ngoba ibukeka njenge-Bing Crosby White Christmas isimo. Ngokujabulisayo, wuhlobo oluhlasimulisayo futhi uma luzwakala luthi ukuqothuka mhlawumbe kulungile, kodwa bengikuhlelile ngakho konke lokhu. ”
Futhi manje, ngemuva kwawo wonke umsebenzi wabo, ifilimu ekugcineni isizenzela phambi kwezithameli, isikhathi esivusa amadlingozi kubo bobabili uMills noRichards njengoba bengakwazanga ukusingathwa kwezethameli ngenxa yezithibelo zeCovid-19.
“Kuyahlekisa, omunye wangibuza engxoxweni izolo, 'Wazi kanjani ukuthi isebenza nini?'” Kusho uRichards ehleka. “Bengifana, njengamanje. Ukusho lokho. Ngaphandle komkami ucabanga ukuthi kuyamangalisa. Yebo, ngicabanga ukuthi lokho kuyinselelo njengamanje. Siqala ukubona izibuyekezo ezinhle zingena, ngakho-ke bekujabulisa kakhulu. ”
Ukuhlehla iyatholakala ukuqasha ku-Amazon Prime, Vudu, AppleTV +, nakuFandango Manje. Bheka i-trailer, futhi usazise uma ngabe uyibonile ifilimu kumazwana angezansi!
U-Aaron AshmoreU-Alyson RichardsUPat MillsUSarah AllenUkuhlehlaUTommie-Amber PirieWaylon Jordan